Vietjet weputara uzo Nha Trang na Busan
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ South Korea na -agbasa » Vietjet weputara uzo Nha Trang na Busan
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ South Korea na -agbasa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Onye na-ebu ọhụụ ọhụụ bụ Vietjet ewepụtala ụzọ ọhụụ mba ụwa kachasị ọhụrụ iji jikọta obodo mara mma nke Vietnam, Nha Trang Na na, South Korea ama ama ọdụ ụgbọ mmiri, na-egosipụta ọrụ itoolu nke ụgbọ elu n'etiti Vietnam na South Korea. Onye na-ebu ụzọ rụọ ọrụ a kpọmkwem n'etiti ebe abụọ ahụ, ụzọ Nha Trang - Busan na-atụ anya na njem ndị njem na-arịwanye elu nke ndị obodo na ndị njem nleta n'etiti mba abụọ a ma gafee mpaghara ahụ. N'oge a, ndị njem niile nọ n'ụgbọ elu ụgbọ elu ndị a pụrụ iche natara ọmarịcha ihe ncheta sitere na ha Nwe obodo.
Nzọ Nha Trang - Busan na-arụ ọrụ ụgbọ elu anọ na-alaghachi kwa izu kwa Mọnde, Wenesde, Satọde na Sọnde na-amalite 16 July 2019. Oge ụgbọ elu dị ihe dị ka elekere anọ na nkeji 40 kwa ụkwụ. Thegbọ elu ahụ ga-apụ Nha Trang na 23.50 wee rute Busan na 06:30. Gbọ elu nlọghachi azụ na Busan na 08: 05 wee rute Nha Trang na 10: 45 (Niile na oge mpaghara).
Dị ka obodo na-ekwo ekwo na ọdụ ụgbọ mmiri na obodo nke abụọ kasị ukwuu na Korea, Busan na-enye ọmarịcha ntụrụndụ, ebe ịzụ ahịa na ahịa ndị a ma ama na-azụ azụ yana ahụmịhe nlegharị anya na-atọ ụtọ na ntinye aka ya nke gosipụtara site na ụlọ, ụlọ arụsị na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie. Ka ọ dị ugbu a, Nha Trang aghọwo ebe osimiri kachasị amasị na Vietnam n'oge na-adịbeghị anya, na-adọta ndị njem nwere ogologo osimiri ya, ebe ndị a ma ama, nri bara ụba na ndị enyi.
Na mbido Machị, asọpụrụ Vietjet dị ka "Onye Kachasị Ọrụ Ndị Ọzọ Na-adịghị Efu Ala Ofesi" na Korea Prestige Brand Awards 2019, nke Korea Economic Daily akwụkwọ akụkọ kwadoro nke gara n'ihu gosipụtara ntụkwasị obi na ntụkwasị obi ndị ahịa Korea nwere na ika ahụ.
Site na netwọk nke ụzọ 120, Vietjet na-arụ ọrụ ụgbọ elu na-adịghị ize ndụ na ọnụego ntụkwasị obi teknụzụ nke 99.64% - ọnụ ọgụgụ kachasị elu na mpaghara Eshia Pacific. Dịka onye otu zuru oke nke International Air Transport Association (IATA), Vietjet enwetala asambodo IATA Operational Audit (IOSA) ma nyekwa ya ọkwa 7-star, ọnụ ọgụgụ kachasị elu maka nchekwa, site na AirlineRatings.
Site n'inye tiketi dị ọnụ, klaasị tiketi dị iche iche na nkwalite mara mma, Vietjet na-emepụta ahụmịhe na-echefu echefu maka ndị njem n'ụgbọ elu ọhụrụ nwere oche dị mma, nhọrọ nke nri itoolu na-atọ ụtọ nke ndị ọrụ ụgbọ mmiri mara mma na ndị enyi na-arụ ọrụ, na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ mara mma.